John Oliver's Marlon Bundo waa sheekada labaad ee la naqdiyay sanadkii hore - dadka - Teles RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE John Oliver's Marlon Bundo sheekadu waxay ahayd buugii labaad ee la dhaleeceeyay sannadkii hore - dadka
John Oliver's Marlon Bundo sheekadu waxay ahayd buugii labaad ee la dhaleeceeyay sannadkii hore - dadka
Ka ilaali bakayle? Tani waa waxa ay dadka qaar ka mid ah rabaan in ay sameeyaan: majaajiliiste Book John Oliver on qoyska bakaylaha qoyska ee Madaxweyne ku-xigeenka Mike dinaar waa liiska ka mid ah buugaagta ugu dhaleeceeyay in maktabadaha dadweynaha ee 2018, sida laga soo xigtay Library American ah Ururka [.] 19659003] "toddobaadkii nolosha Marlon Buunda caawa la John Oliver" qeexayaa xaaskiisa buug ee dinaar, Karen oo dinaar, oo dinaar oo gabadhiisa Charlotte ayaa qoraal ku saabsan xayawaanka qoyska. Laakiin parody kitaabka Marlon Buunda, waa gay iyo (Alert Baabbi'iyihii!) Xaaska kale wiil bakayle, calaamad garneel ee jagada madaxweyne ku xigeenka dhanka ah guurka dadka isku jinsiga. Buuga qudhiisu helay kaalinta labaad ee liiska, taas oo ay kaalinta by buug carruurta cinwaankeedu Alex Gino "George" on ilmaha transgender ah.
ALA waxay raacday caqabadaha 347 sannadkii hore, oo lagu qeexay codsi rasmi ah. in buugaag laga saaro maktabadaha iyo dugsiyada. Inta badan buugaagta ku qoran liistada ugu xiisaha badnayd ayaa ku jira mawduucyada LGBTQ.
Dhanka kale, Pences waxay daabacaan buug labaad oo ah Marlon Bundo toddobaadkan. "Maalinta Marlon Bundo ee caasimadda Nation," ayaa lagu daabacay wargeyska ra'iisul wasaaraha Regnery, oo ka bilaabi doona berrito.
Dadka: R. Kelly taageerayaasha way ka xanaaqeen ka dib markii ay bixiyeen 100 dollar oo loogu talagalay wareegyada 28 ee xaflad!
Youtube: CARRUURTA UGU HOREEYA OM IN 2019
Cilmi-baadhayaashu waxay daabacaan wadnaha 3D
Oprah Winfrey lacag ma qarashgarayn doono qareennada - VIDEO
Shaqada: FNE maalmo furan oo ku yaal Bafoussam
Weerar uu ku qaaday argagixisanimada argagixisada Boko Haram ayaa 9 ku dhintay magaalada Kolofata
DADKA & LIFESTYLE3,114